कोपा अमेरिकाको लागि अर्जेन्टिनाद्वारा ३२ खेलाडीको सूची सार्वजनिक
एजेन्सी । ब्राजिलमा हुन लागको कोपा अमेरिका २०१९ को लागि अर्जेन्टिनाले ३२ सदस्यीय खेलाडी सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीमा स्टार खेलाडी लियोनल मेसी पनि परेका छन् । हाल अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिममा लि...
‘भनसुनको भरमा’ प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटका खेलाडी छनोट !
विराटनगर । प्रदेश १ बाट भनसुनका आधारमा प्रक्रिया नै पूरा नगरी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा पठाइएको छ । छनोटको सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगराइएपछि पूर्वर...
खेलकुद काठमाडौं– क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता प्रतियोगिताको ड्राफ्टमा नेपालका चार जना खेलाडी दर्ता भएका छन्। आगामी जेठ ८ मा लन्डमा हुने खेलाडी छनोटका लागि नेपालका चार...
डब्लुसिएल ड्राफ्ट सम्पन्न : कुन टिमले हुन खेलाडी लिए?
काठमाडौँ : क्वीनन्स इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टको आयोजनामा आगामी असोजकमा काठमाडौंमा हुने वुमन्स च्याम्पियन्स लिग टी २० क्रिकेटको ड्राफ्ट मंगलवार सम्पन्न भएको छ। सहभागि ५ टिमले ड्राफ्टबाट ११-११ खेलाडी आफ...
डब्लुसिएलका लागि ५५ खेलाडी ड्राफ्टबाट छनोट, कुन टिमले कसलाई भित्र्याए?
खेलकुद काठमाडौं– वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग (डब्लुसिएल) टी–२० क्रिकेट खेल्नका लागि पाँच टिमले ड्राफ्टमार्फत खेलाडी भित्र्याएका छन्। मंगलबार भएको ड्राफ्टमार्फत प्रत्येक टिमले ११ खेलाडी आफ्नो टिममा भ...
५५ खेलाडी अनुबन्धित
काठमाडौ । वुमन्स च्याम्पियन्स (डब्लूसीएल) टी २० लिग को ड्राफ्ट सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा मंगलबार सकिएको ड्राफ्टबाट ५५ खेलाडीलाई ५ टोलीले अनुबन्ध गरेको छ । नेपालमै पहिलोपटक भएको ड्राफ्टमा कुल १०९ ...
काठमाडौं । वेष्ट इन्डिजमा हुने क्यारेबियन प्रिमियर लिग(सीपीएल) ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेटको खेलाडी सूचीमा नेपालका चार खेलाडी परेका छन् । हिजो सार्वजनिक गरिएको ड्राफ्टमा नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप ला...
लाजियोले जित्यो कोपा इटालिया
कोपा इटालियाको कप फुटबलको उपाधि लाजियोले जितेको छ । बुधबार राति भएको फाइनल भिडन्तमा लाजियोले एटलान्टालाई २–० गोलले हरायो । लाजियोको घरेलु मैदानमा खेलिएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा खेलको अन्तिम आड...